မန္တလေး – The Voice Journal
ဈေးဝယ်ယူနိုင်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စတိုးက မိမိအိမ်ရှေ့သို့ ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုလျှင် ဈေးဝယ်ယူလိုလျှင် ဆိုင်ဖွင့်ထားသည့်နေရာသို့ သွားရောက်ရသော်လည်း ယနေ့ခေတ်တွင်တော့ ဈေးသည်များက အိမ်ရှေ့ပေါက်အရောက်လာခဲ့ပြီ။ “ကြုံတဲ့နေရာမှာ ဝယ်လို့ရတယ်။ အဲဒါထူးခြားပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာရော အရှေ့တောင်အာရှမှာပါ ပထမဆုံးပါ”ဟု Get Ride ၏...
Articles / lotaya
လမ်းမြေပေါ် ကျူးကျော်နေထိုင်သည့် နေအိမ်ကိုးလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာမှ အင်အားသုံးဖျက်သိမ်း
မန္တလေး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ကျွန်းလုံးဥသျှောင်ရပ်ကွက် မန္တလေး-စစ်ကိုင်းကားလမ်းပေါ်ရှိ လမ်းမြေကျူးကျော်သည်ဟုဆိုကာ နေအိမ်ကိုးလုံးကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာမှ အင်အားသုံးဖျက်သိမ်းလျှက်ရှိသည်။ လမ်းမြေပေါ် ကျူးကျော်နေထိုင်သည့် နေအိမ် ၃၂ လုံးရှိသည့်အနက် ၂၃ လုံးသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖျက်သိမ်းခိုင်းစဉ်က ဖျက်သိမ်းပေးခဲ့ပြီး...
အစိုးရဟောင်း၏ ကြွေးကျန်ငွေများကို ပညာရေးတွင် အသုံးပြုလိုသည်ဟု မန္တလေးတိုင်းအစိုးရပြော
မန္တလေး၊ ဇူလိုင် ၁၃ ယခင်အစိုးရက ပြန်လည်ပေးဆပ်ပြီးသည့် ကြွေးကျန်ငွေ ကျပ်သန်းသုံးထောင်ခန့် (သုံးဘီလီယံ) ကို ပညာရေး ကဏ္ဍတွင် အသုံးပြုလိုကြောင်း မန္တလေးဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ယင်းငွေများကို ယခုနှစ် ဧပြီလအတွင်းက နောက်ဆုံးအရစ်ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ လမ်းတံတား၊...
lotaya / Politics
တာဝန်ပေးလျှင် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မည်ဟု ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ပြော
မန္တလေး ၊ ဇူလိုင် ၁၂ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တာဝန်ပေးလျှင် ၀င်မည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောကြားသည်။ ” ဆရာကတော့ ခိုင်းတာလုပ်တာ၊ လူကြီးခိုင်းတာ လုပ်တာ၊ ဆရာက ဘယ်နေရာနေပါဆိုရင် နေရုံပဲ...
lotaya / News
လဝကဌာန အပြောင်းအလဲဖြစ်ရန် ကြိုးစားမည်ဟု မန္တလေးဝန်ကြီးအသစ် ပြော
မန္တလေး၊ ဇူလိုင် ၁၂ အစိုးရ၏ လက်ကျန်တစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်း လဝကဌာန အပြောင်းအလဲဖြစ်ရန် ကြိုးစားမည်ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဝန်ကြီးအသစ် ဦးအောင်ကြည်က ပြောကြားသည်။ ယနေ့ကျင်းပသည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေးတွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးအဖြစ် လွှတ်တော်မှ ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုပြီးနောက်...
မန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးအဖြစ် ဒေါ်လှမြင့်ကို အမည်စာရင်းတင်သွင်း
မန္တလေး၊ ဇူလိုင် ၁၁ လစ်လပ်နေသည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးနေရာတွင် မန္တလေးခရိုင် တွဲဖက်တရားသူကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည့် ဒေါ်လှမြင့်ကို တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်က အဆိုပြု တင်သွင်းလိုက်သည်။ အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ် ဒေါ်လှမြင့်သည် ရှေ့နေရှေ့ရပ်နှင့် စစ်ဆေးရေးဌာန၊...
Articles / lotaya / News
ဦးဝီရသူကို ဆင့်ခေါ်သည့် တရားရုံးအမိန့်စာ မန္တလေး သုံးနေရာတွင် ကပ်
မန္တလေး၊ ဇူလိုင် ၁၁ နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) ဖြင့် အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုခံထားရပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် နေသည့် အမျိုးသားရေးဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ(ခ) ဦးဝီရသူကို တရားရုံးသို့ ဆင့်ခေါ်သည့် အမိန့်စာများကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းက မန္တလေးမြို့...
“မိုးမိုး မိုးလား မောင်တို့၊ လေလေ လေလား မောင်တို့၊ မိုးမရွာလို့ လွန်ဆွဲတယ်၊ မိုးခေါင်ကျော်စွာ မစပါဦး…” စင်မြင့်ပေါ်မှာ သံချပ်အပြီးတွင် မောင်းသုံးချက်တီးလိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုက်နက် စင်အောက်မှ လူအုပ်ကြီးက တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် သူနိုင်ကိုယ်နိုင် အပြိုင်ကြဲကြတော့သည်။...
Articles / Crime & Accident / lotaya / Politics
မန္တလေးမြို့၏ လမ်းမများသည် မလုံခြုံသေးကြောင်း မောင်အေးချမ်းကျော်၏ဖြစ်ရပ်က သက်သေပြနေသည်။ ဖြစ်ပုံမှာ အဒေါ်နှင့် ညီမဖြစ်သူတို့ အပြင်ထွက်သွားချိန် အမေက သူ့ကို လှမ်းခေါ်ခိုင်းသည်။ အဒေါ်တို့က မကြားဘဲ အပြင်ဆက်သွားသည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မောင်အေးချမ်းကျော်သည် အမေနှင့် စကားများသည်။...
Articles / Mandalay
အမြင့်ဆုံး ကြိုးတံတားအသစ် လာမည်၊ ကြာမည်
မြန်မာ့အဓိကကုန်သွယ်မှုလမ်းမကြီးပေါ်တွင် မြန်မာ့အမြင့်ဆုံးကြိုးတံတားတစ်စင်းကို မကြာမီ တည်ဆောက်တော့မည် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ လေ့လာစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့် စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ကျော် အသုံးပြု၍ တရုတ်ပညာရှင်များဖြင့် တည်ဆောက်သွားမည်ဟု ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းက စတင်နိုင်မည်ဟု...
နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်း စိန်ခေါ်ချက်များကို မည်သို့ရင်ဆိုင်ကြမည်နည်း
သမိုင်းဝင် ဇန်နဝါရီ စီရင်ချက်
ဟောင်ကောင်အကျပ်အတည်းကို ကျော်လွားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ပြော
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးကို လိင်အင်္ဂါဖြင့် တို့ထိခဲ့သူကို ထောင်ဒဏ်ငါးလ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်